MOOC waxa ay si gaar ah uga golleedahay in ay taageerto tababbarka iyo taageerada macallimiinta tacliinta sare, macalimiin cilmi-baadhiseed iyo ardada dhakhaatiirta ah xagga aqoonta ay u leeyihiin habraacyada waxbarashada iyo hab-dhaqankooda waxbaridda iyo qiimaynta.
Inta lagu jiro MOOC, su'aalaha soo socda ayaa wax laga qaban doonaa:
Waa maxay waxbarashada firfircoon? Sideen ardaydayda uga dhigaa firfircooni? Farsamooyinkee ayaan isticmaali karaa?
Maxaa ku dhiirigeliya ardaydayda inay wax bartaan? Waa maxay sababta ardayda qaar ay u dhiirigeliyaan qaarna aanay u dhicin?
Waa maxay xeeladaha wax-barashadu? Waa maxay waxqabadyada waxbarida iyo waxbarashada ay tahay in loo isticmaalo si ardayda looga qaybgeliyo? Sidee loo qorsheeyaa waxbariddaada?
- Waa maxay qiimaynta waxbarashada? Sidee loo dejiyaa dib u eegista asaaga?
- Maxay dabooshaa fikradda kartida? Sidee loo horumariyaa koorsada, dibloomada hab ku salaysan xirfadaha? Sidee loo qiimeeyaa xirfadaha?
- Sida loo dhiso online ama koorsooyin isku dhafan? Waa maxay agabka, waxqabadyada iyo xaaladaha si kor loogu qaado barashada khadka ee ardayda?
Tababarka wax lagu baro tacliinta sare Diisambar 18, 2021Tranquillus
horeCilmi-baaris dib loo soo saari karo: mabaadi'da hab-raac ee sayniska hufan
socdaSemantic Web iyo Web of Xogta